Xasan Sheekh oo beddelaya madaxa shaqaalaha Villa Somalia (Chief of Staff) | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Xasan Sheekh oo beddelaya madaxa shaqaalaha Villa Somalia (Chief of Staff)
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa la filayaa inuu is-beddel ku sameeyo qaar ka mid ah agaasimayaasha tirada badan ee Villa Somalia kadib markii xafiiska madaxweynuhu noqday mid aan wax qabad muuqda lahayn.
Ilo lagu kalsoon yahay ayaa Wardoon.net u xaqiijiyey in xubnaha xilka laga qaadi doono uu ka mid yahya madaxa shaqaalaha Villa Somalia (Chief of Staff) oo lagu magacaabo Cali Cumar oo loo yaqaan Cali Balcad.
Cali Balcad ayaa sida la sheegay noqday nin fadhiid ah oo aan waxba qaban, islamarkaana iskahorkeena madaxweynaha iyo xubnaha kale ee ku dhow, sida xubno ku sugan Villa Somalia ay u sheegeen Wardoon.net.
Ninkan oo markii horeba si saaxiibnimo ah uu meesha ku keenay Faarax C/qaadir, ayaa sidoo kale lagu eedeeyey inuu yahay nin qabyaaladda ay aad u dillootay, oo ay kasoo dacwadeen dad badan oo madaxweynaha ku dhow oo sheegay inuu dadka qabiil ku kala sooco. Cali Balcad waxa uu kasoo jeedaa beesha Hilibi Daarandoole.
Xafiiska madaxweynaha iyo waxqabadka Xasan Sheekh ayaa isugu soo ururay safar iyo socdaal aan dhammaad lahayn tan iyo intii xilka loo dhiibay Cali Balcad.
Xubnaha sidoo kale xilka laga qaadi doono waxaa ka mid ah Saadaq Cabdikariin oo madaxweynaha uu adeer u yahay, islamarkaana qaba gabar kale oo madaxweynaha uu adeer yahay.
Wiilkan dhallinyarada ah, oo markii horeba ina-adeernimo lagu shaqaaleeyey ayaa waxaa xilka looga qaadayaa kadib markii howsha loo dhiibay ay ka tan weynaatay, ayna cadaatay inuusan garaneyn meel laga maro. Waa agaasime, balse lama yaqaan nooca agaasime ee uu yahay. Villa Somalia waxay leedahay shan agaasime, oo aan caddeyn waxa ay qabtaan.
One thought on “Xasan Sheekh oo beddelaya madaxa shaqaalaha Villa Somalia (Chief of Staff)”
maxamed suluub says:
14/06/2015 at 14:45
Axmed Robloow dadka Agasimyahasha ah oo madaxtoyada iska dhoban,waxay ku tusaysa jahilnimada somalida hareysay,wana waxa somaliya meshas fosha xun dhigay waa waxas iyo wax lamid ah,sida aad ogtahay dad badan oo somaliya oo wax yaqan aya badan,shaqada madaxtoyada wax ween kaqaban karta,in lays amino waa arin muhim ah weeye in shaqsiyad aan waxba so kordhinan dhoblan lahayen xasifka madaxtoyada somaliya.